China Batching Mixer System Fanamboarana sy Orinasa | Jusheng
Rafitra fanangonana mitambatra
Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy
Ny milina famonoana no singa fototra ao amin'ny gara mampifangaro, izay amin'ny ankapobeny dia azo zaraina amin'ny fomba roa: fandrefesana ny fitomboana sy ny fandrefesana ny tsirairay.
Ny fandrefesana cumulative amin'ny ankapobeny dia mampiasa fifehezana varingarina amin'ny famoahana fitaovana. Ny fandrefesana ny fitambaran'ny fitaovana tsirairay dia marina kokoa noho ny fandrefesana ny fivoahan'ny fehikibo teo aloha. Ny fitaovana ilaina dia afangaro amin'ny mpampita fehikibo farany ambany aorian'ny fandrefesana mifandimby, ary avy eo ampitaina amin'ny fehikibo ataon'ny mpampita fehikibo. Masinina na siny mitainga.
Ny fandrefesana misaraka dia midika fa ny fitaovana tsirairay dia refesina tsirairay amin'ny alàlan'ny hopper milanja iray hafa. Ireo fizotrany ireo dia azo tanterahina amin'ny fotoana iray, mitahiry fotoana fandrefesana ary mahatonga ny fandrosoana fandrefesana ho marina kokoa.
Ny habeny sy ny habetsahan'ny hopper fitehirizana ny milina fanaovana milina dia natao arakaraka ny filan'ny mpampiasa, amin'ny ankapobeny 3-5 siny sy efamira / siny 8-40, izay afaka mitahiry karazana fasika, fasika ary vato samihafa.
Ny firafitry ny milina famonoana dia azo noforonina ho toy ny rafitra tany madio, rafitry ny trano fanatobiana semi-tany na firafitra trano fitehirizana feno araka ny filan'ny mpampiasa. Noho ny haavon'ny famatrarana voafetra an'ny loader, ny firafitry ny tany madio dia mitaky ny fampiasan'ny mpampiasa mialoha ny elanelan'ny entana. Ny firafitry ny silo antsasa-ambany na ny firafitra silo feno dia afaka mamonjy ny tehezan-kafatra, fa ity farany kosa manana lavaka, noho izany dia mila atao hanatsarana ny lakan-drano any an-davaka, ary hiantohana ny fahaizan'ny mpampita fehikibo. conveyor, ny conveyor fehin-kibo dia mila lava kokoa rehefa mijanona tsy miova ny zoro fampitana, izay mampitombo ny vidin'ny fitaovana.
maodely tsia. PLD800 PLD1200 PLD1600 PLD2400 PLD3600 PLD4800
fahafahan'ny hoppera milanja (m³) 1 * 0,8 1 * 1.2 1x1.6 1x2.4 1x3.6 1x4.8
fahafahan'ny hopper fitehirizana (m³) 3 * 4 3 * 8 4x10 4x10 4x14 4x16
marina ny batching ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2%
milanja mavesatra (kg) 0 ~ 1000 0 ~ 1500 0 ~ 2500 0 ~ 3500 0 ~ 4500 0 ~ 6000
karazan-karazan'ilay famonoana 2-3 2-3 4 4 4 4
hafainganam-pandeha conveyor fehikibo (m / s) 2 2 2 2 2 2
hery (KW) 4-5.5 5.5-7.5 11 11 15 15
Ny milina fametahana simenitra PLD800 / PLD1200 dia fitaovana famonoana mandeha ho azy ampiasaina miaraka amin'ny mixer. Izy io dia afaka mamita ho azy ireo ny fomba fametahana karazan'entana roa karazana toy ny fasika sy vato arakaraka ny refy iorenan'ny mpampiasa. Ity milina ity dia azo ampiasaina miaraka amin'ireo mixer JS500 sy JS750 hananganana foibe fampifangaroana simenitra tsotra. Izy io dia fitaovana famokarana beton ho an'ny tetik'asa fananganana indostrialy sy sivily, tranokala fananganana antonony sy kely ary ozinina. Ny masinina dia misy mekanisma famahanana, rafitra fandanjana, rafitra fanaraha-maso herinaratra, sns. Ny mampiavaka azy dia ny mekanisma famahanana dia voalamina amin'ny endrika "iray", ny mpamaky entana, ny fahanana sakafo dia ny fividianana conveyor fehikibo, ny endrika mavesatra dia levera + sensor, ary marina ny fandrefesana.
1. Ny fandanjana marina, ny lanjan'ny lanjany avo; 2. Fampisehoana tsara ny sela entana, ny fandanjana dia marina sy marin-toerana; 3. Ny firafitra ankapobeny dia mitombina, henjana ary tsara tarehy; 4. Milamina ny fampitana, ary azo omena ara-dalàna ny fitaovana; 5. Mandanjalanja agregat 2 karazana amin'ny fotoana iray, miaraka amin'ny fotoana fandrefesana fohy sy fahombiazana avo lenta;
Ny milina fametahana simenitra PLD800 / PLD1200 dia azo ampifandraisina amin'ny maodely mifanaraka amin'izany mba hamoronana zavamaniry fikorontanana vita amin'ny beton miaraka amina endrika sy miavaka manokana. Ampiasaina matetika amin'ny HZS25 / HZS35 zavamaniry fandroana na tranokala kely fananganana izy ireo.
Ny milina fametahana simenitra PLD1600 / 2400/3600/4800 dia manana marim-pototra avo lenta sy marina tsara. Ny fitaovana fikolokoloana dia mandray ny fividianana conveyor fehikibo na fomba famahanana loader mba hiantohana amin'ny fomba mahomby ny fahamarinan'ny tahan'ny fampifangaroana simenitra / fasika / vatokely na karazan-javatra fasika sy vatokely telo mahery. Ny maodely lehibe indrindra dia ny PLD1600 milina fitehirizana trano fitehirizam-bokatra telo, ny milina fametahana efatra trano fanatobiana entana. Ny milina fametahana beton dia fitaovana mandeha ho azy ampiasaina amin'ny fizarana habetsaky ny fitaovana isan-karazany toy ny fasika sy vatokely. Ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny fanamboarana vita amin'ny beton izy io hanoloana ny mizana mizana na ny fandrefesana boky. Izy io dia manana mari-pahaizana avo lenta, fahombiazan'ny fizarana avo lenta ary mandeha ho azy. Ny endri-javatra mandroso dia iray amin'ireo ampahany lehibe amin'ny fametrahana fitaovana feno ho an'ny zavamaniry fampifangaroana beton tanteraka. Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka, ny milina fametahana beton dia namorona rafitra vokatra maro andian-karazany, maro karazana ary misy tanjona maro. Ampiasaina matetika amin'ny HZS60 / HZS90 / HZS120 / HZS180 batching plant izy ireo
Ny toetra ara-teknikan'ny milina fanaovana batterie
• Milanja milanja sy milanja tsara, ary marina tsara ny lanjany;
• Load cell miaraka amin'ny fampisehoana tena tsara, milanja marina sy milamina;
• Ny firafitra ankapobeny dia mitombina, henjana ary tsara tarehy;
• Afaka milanja karazana agregat 3-5, miaraka amin'ny fotoana fandrefesana fohy sy ny fahombiazany avo;
• Misy fitaovana mampihenjana visy amin'ny rambony, izay afaka manitsy ny fihenjanan'ny fehikibo, izay mety sy haingana;
• Ny vibrators dia apetaka amin'ny rindrina eo amin'ny fitoeram-pasika sy ny siny mandanja ny fasika hanamorana ny fandanjana sy ny famoahana ..
Concrete Mixer Spare Parts, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra, Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonana mitambatra, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy,